Ngaba uYehova Unokumvumela UmKristu Aswele Ukutya? | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTurkmen (SesiCyrillic) IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo
Ngaba amava kaDavide akwiNdumiso 37:25 namazwi kaYesu akuMateyu 6:33 athetha ukuba uYehova akasoze amvumele umKristu ukuba aswele ukutya?
UDavide wathi “andikaboni nabani na olilungisa eshiywe ngokupheleleyo, nenzala yakhe ifuna isonka.” Wawathetha la mazwi ngokusuka kumava akhe. Wayesazi ukuba uThixo uhlala esikhathalele. (INdu. 37:25) Noko ke, amazwi kaDavide akathethi kuthi akukho mkhonzi wakha wahlupheka okanye oya kuze ahlupheke.
Ngamanye amaxesha, noDavide wayekhe atsale nzima. Yakha yenzeka loo nto xa wayebaleka uSawule. UDavide wayengenakutya kwaneleyo, waza wacelela yena nabo wayehamba nabo isonka. (1 Sam. 21:1-6) Ngelo xesha, uDavide ‘wayefuna isonka.’ Sekunjalo, wayesazi ukuba uYehova akamlahlanga. Inyaniso kukuba, akukho ndawo ethi uDavide kwafuneka ade abe ngumngqibi ukuze afumane ukutya.
KuMateyu 6:33, uYesu usiqinisekisa ngelithi uThixo uya kubanika izinto abazidingayo abakhonzi bakhe abathembekileyo ababeka uBukumkani kwindawo yokuqala ebomini. Wathi, “Qhubekani, ke ngoko, nifuna kuqala ubukumkani nobulungisa bakhe, yaye zonke ezinye izinto [kuquka ukutya, isiselo, nempahla] ziya kongezelelwa kuni.” Noko ke, uYesu waphinda wathi, ngenxa yentshutshiso ‘abazalwana’ bakhe banokuthwaxwa yindlala. (Mat. 25:35, 37, 40) Yakha yamfikela nompostile uPawulos. Ngamanye amaxesha wayethwaxwa liphango nonxano.—2 Kor. 11:27.
UYehova usixelela ukuba siya kutshutshiswa ngeendlela ezahlukahlukeneyo. Unokusivumela ukuba siswele njengoko simncedisa ekuphenduleni izimangalo zikaMtyholi. (Yobhi 2:3-5) Ngokomzekelo, amany’ amaKristu, njengalawo ayevalelwe kwiinkampu zoxinaniso zamaNazi, azibhaqa esengxakini ngenxa yentshutshiso. Ukuvinjwa ukutya yenye yeenkohlakalo ezazisenziwa ukuzama ukwaphula ingqibelelo yamaNgqina. AmaNgqina athembekileyo ahlala ethobela uYehova; ibe naye zange awalahle. Wawavumela ukuba alingwe, njengoko evumela onke amaKristu ukuba alingwe ngeendlela ezahlukeneyo. Noko ke, uYehova uyabaxhasa bonke abo basokola ngenxa yegama lakhe. (1 Kor. 10:13) Masihlale siwakhumbula amazwi akwabaseFilipi 1:29: “Nanikwa ilungelo ngenxa kaKristu, kungekuphela nje lokuba nikholwe kuye, kodwa nelokuba nibandezeleke ngenxa yakhe.”
UYehova uthembisa ukuba uya kuhlala engakubakhonzi bakhe. Ngokomzekelo, uIsaya 54:17 uthi: “Nasiphi na isixhobo esiya kuyilwa nxamnye nawe asiyi kuphumelela.” Esi sithembiso nezinye ezifana naso ziqinisekisa ukuba uThixo uya kuhlala ebakhusela abantu bakhe njengeqela. Nakuba kunjalo, umKristu unokuvavanywa de kuse ekufeni.